Degdeg:- Ahlusunna oo diiday in deegaanadeeda la keeno ciidan katirsan DFS “Heshiiskii maxaa iska badalay”. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
[ February 20, 2020 ] Dowladda China oo Heshay wariyaal si qaldan u tabinayay Caabuqa Coronavirus + Amar adag oo lasoo saaray.	Faalloyinka
HomeSoomaliyaDegdeg:- Ahlusunna oo diiday in deegaanadeeda la keeno ciidan katirsan DFS “Heshiiskii maxaa iska badalay”.
Degdeg:- Ahlusunna oo diiday in deegaanadeeda la keeno ciidan katirsan DFS “Heshiiskii maxaa iska badalay”.
July 27, 2019 marqaan Soomaliya, Wararka maanta 1
In ka badan 100 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya oo qorshuhu ahaa in saaka la geeyo magaalada Dhuusamareeb ayaa sida la sheegayo lagu baajiyay amar ka soo baxay maareeyaha garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb oo faray in diyaaradda ciidamada sidday aysan ka soo degi karin garoonka.
Sidoo kale wararku waxay sheegayaan in hoggaamiyaha Ahlu-sunna Macallin Maxamuud uu amar ku bixiyay in aan ciidamo ka socda magaalada Muqdisho ama ka baxsan maamulkooda aan la keeni karin degmada Dhuusamareeb
Muuse Biixi oo xidhay suxufi dhowr sano kahor dhaliili jiray.
Muqdisho ilmeyneyso says:
Ciidanka eey Muqdisho ka qaadaayaan oo eey geenayaan Dhuusomaree meey horta ku difaacaan Muqdisho. Cajiib